အပြစ်သား၏ ဆုတောင်းခြင်းသည် အဘယ်နည်း။?
အပြစ်သား၏ဆုတောင်းခြင်းသည် သူတို့သည် အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကယ်တင် ရှင်ကိုလိုအပ်ကြောင်းသိရှိသောအခါ ဆုတောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ အပြစ်သား၏ ဆုတောင်းခြင်းသည် လုံလောက်ပြည့်စုံမှု မရှိနိူင်ပေ။ အပြစ်သားတစ်ယောက်သည် မိမိသည်အပြစ်သား ဖြစ်ကြောင်းသိရှိ နားလည်၍ ကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်ကြောင်း သိရှိမှသာလျှင် ထိုသူ၏ ဆုတောင်းသံသည် ထိရောက်မှု ရှိသည်။
အပြစ်သား၏ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ပထမယူဆချက်သည် အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ရောမ၊ ၃း၁၀ “ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ၊ တယောက်မျှမရှိ” ဟုမိန့်ဆိုထားပါသည်။ လူသားအားလုံးသည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြ ထားပါသည်။ အပြစ်သားမှန်သမျှတို့သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်တရားနှင့် ခွှင့်လွှတ်ခြင်းတရား လိုအပ်သည်။ (တိ၊ ၃း၅-၇)။ ကျွနူ်ပ်တို့၏ အပြစ်တရားကြောင့် ထာဝရပြစ်ဒဏ်ကို ကျွနူ်ပ်တို့ခံထိုက် သည် (မဿဲ၊ ၂၅း၄၆)။ အပြစ်သား၏ဆုတောင်းခြင်းသည် ကျေးဇူးတော်တရားခံစားရရှိရန် တောင်း လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားစီရင်ခြင်းအတွက် မဟုတ်ပေ။ အမျက်ဒေါသခံစားရန် အတွက်လည်း မဟုတ်ပဲ ဂရုဏာတော်တရား တောင်းလျှောက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
အပြစ်သား၏ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ဒုတိယယူဆချက်သည် ပျောက်ဆုံးသောသူများ နှင့် အပြစ်သားများအတွက် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သော အရာများသိရှိခဲ့ပြီးသော ဆုတောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည်လူဇာတိကို ခံယူ၍လူသားတစ် ဦးဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည် (ယောဟန်၊ ၁း၁၊၁၄)။ သခင်ယေရှုက ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရား အကြောင်းကို ကျွနူ်ပ်တို့အားသွန်သင်ခဲ့ပြီး ပြည့်စုံ၍အပြစ်ကင်းသော အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင် ခဲ့သည် (ယောဟန်၊ ၈း၄၆၊ ၂ေကော၊ ၅း၂၁)။ ထို့ပြင်သူသည် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် ကျွန်ူပ်တို့ကိုယ် စားအသေခံ၍ ကျွန်ူပ်တို့နှင့်ထိုက်တန်သော အပြစ်ကြွေးအားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့သည် (ရောမ၊ ၅း၈)။ အပြစ်တရား၊ သေခြင်းတရားနှင့် ငရဲမီးတိုင်တို့ကို အောင်မြင်ကြောင်းသက်သေထူခြင်းအားဖြင့် သခင် ယေရှုသည်သေခြင်းမှ ထမြောက်ခဲ့သည်။ (ကော၊ ၂း၁၅၊ ၁ေကော၊ အခန်းကြီး၁၅)။ ကျွနူ်ပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လျှင် အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းခြင်းအခွင့်ရ၍ ကောင်းကင်ဘုံထာဝရ အိမ်တော်၌ စိုးစံပါလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွနူ်ပ်တို့ကိုယ်စားအသေခံကြောင်းနှင့် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ကြောင်းကို ကျွနူ်ပ်တို့ယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်။ (ရောမ၊ ၁ဝး၉-၁၀)။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာလျှင်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် သာလျှင် ကျွနူ်ပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်။ ဧဖက််၊ ၂း၈ က “ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူး တော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏၊ ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရား သခင်သနားတော်မူရာ ဖြစ်သတည်း “ ဟုမိန့်ဆိုထားပါသည်။
အပြစ်သား၏ဆုတောင်းခြင်းသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည် ကြောင်းကို ဘုရားသခင်အားရိုးသားစွာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ “ ထူးဆန်းသော စကားလုံးတို့ကို ရွေး၍ မြွက်ဆိုခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။ ကျွနူ်ပ်တို့ကို ကယ်တင်ပေးနိူင်သော သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်မှသာကယ်တင်ခြင်း ရရှိနိူင်သည်။ မိတ်ဆွေသည် အပြစ်သားဖြစ် ကြောင်းသိရှိ၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်သခင်ယေရှုခရစ်တော် လိုအပ်ကြောင်းကို သိရှိပါကဘုရားသခင် ထံသို့ ဤသို့ဆုတောင်းပါ။ “ ဘုရားသခင်၊ ကျွနူ်ပ်သည် အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းကို ကျွနူ်ပ်သိရှိပါ၏။ အပြစ်တရား၏အခကို ခံစားရန် ကျွနူ်ပ်ထိုက်တန်ကြောင်း ကျွနူ်ပသိရှိပါ၏။ သို့သော် သခင်ယေရှုခရစ် တော်ကို ကျွနူ်ပ်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကျွနူ်ပ်ယုံကြည်ကိုးစားပါ၏၊ သခင်ယေရှု၏ အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းက ကယ်တင်ခြင်းကိုစီမံပေးကြောင်း ကျွနူ်ပ်ယုံကြည်ပါ၏။ သခင်ယေရှုကို ကျွနူ်ပ်ယုံကြည်၍ သခင်ယေရှုသာလျှင် ကျွနူ်ပ်၏ကယ်တင်ရှင် အသက်သခင်အဖြစ် ကျွနူ်ပ်ယံကြည်ပါ ၏။ ကျွနူ်ပ်ကို ကယ်တင်၍အပြစ်လွှတ်သောကြောင့် ကိုယ်တော့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ ! အာမင် !